C/laahi Goodax Barre ka hadlay dhacdo maalintii shalay ka dhacday xarunta doorashada ee Jowhar (DHAGEEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/laahi Goodax Barre ka hadlay dhacdo maalintii shalay ka dhacday xarunta doorashada ee Jowhar (DHAGEEYSO)
C/laahi Goodax Barre oo maalintii shalay ku guuleystay doorashada ka dhacday magaalada Jowhar ee lagu dooranaayay xubinta Hirshabeele ee Aqalka hoose uga soo galaya baarlamaanka Soomaaliya ayaa eedeyn culus u jeediyay maamulka Hirshabeele iyo ciidamada ku sugan magaaladaas.
Xildhibaan C/laahi Goodax Barre oo ka mid ah mucaaradka sida weyn uga soo horjeeda madaxweyne Xasan Sheekh ayaa markii uu shalay ku guuleystay kursiga sheegay inuu aad uga xun yahay tacadiyada ay hay’adaha amniga ka geysteen magaalada Jowhar, isagoo ku eedeeyay inay hoolkii doorashada soo galeen islamarkaana ay handadeen dadkii waday doorashada.
Sidoo kale, C/laahi Goodax Barre ayaa sheegay in la isku dambeyn doonno islamarkaana laga xisaabtami doono falalka ay hay’adaha amniga ka geysteen xarunta doorashada ee magaalada Jowhar.
“Waxaa wax lala yaabo ah in taliyeyaasha nabad-sugidda iyo kuwa booliska ee sida xoogga leh kusoo galay hoolka doorashada ka socotay ee magaalada Jowhar oo xitaa ka xishoon waayay wixii ay halkaasi ka geysteen, arrintan waxay calaamad madow ku tahay maamulka halkaan laga dhisay ee Hirshabeele”. Sidaas waxaa yiri C/laahi Goodax Barre.